Nokia ရဲ့ အခါလွန်မိုးများ (Nokia9PureView အားတူးဆွခြင်း) - PX
Nokia9နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့စပြီးကြားခဲ့ရတာဟာ Snapdragon 835 ကာလလောက်ကတည်းက ထင်ရဲ့။ အဲဒီအချိန်တုန်းက တခြားဖုန်းတွေမှာ Camera ၂လုံးတောင် အနိုင်နိုင်သုံးနေကြချိန် Nokia က Camera ၅ လုံးဆိုတော့ Fan တွေအနေနဲ့ “Nokia တော့ ကြမ်းတော့မယ်” ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့ စောင့်မျှော်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် 2019 MWC မှာ Nokia9PureView ကို မိတ်ဆက်လိုက်ချိန်မှာတော့ Fan အတော်များများဆီကနေ ထွက်လာတဲ့ Feedback တွေဟာ စိတ်ပျက်အားလျော့သံတွေသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
Android One နဲ့အတူ Smartphone လောကကို Nokia အနေနဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ခြေချခဲ့တုန်းက “Nokia ပြန်လာပြီ” ဆိုတဲ့အကြောင်း ကိုယ်တိုင်ရေးသားဖြစ်ခဲ့တယ်။ Feature Phone တွေခေတ်ကတည်းက Nokia နဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ကြတဲ့ Fan တွေကလည်း Nokia ရဲ့ Brand Image ကို ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Nokia ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ဟုတ်သယောင်ယောင်ရှိခဲ့ပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Nokia ရဲ့လားရာလမ်းစဉ်ဟာ ပုံစံတစ်မျိုးပဲသရုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မင်းသားလိုမျိုး တဖြည်းဖြည်းရိုးအီစရာကောင်းလာခဲ့တယ်။
Feature ဖုန်းတွေခေတ်တုန်းက အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်မှုကို Nokia ရဲ့အားသာချက်အဖြစ် အများကသတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် Android ဖုန်းတွေခေတ်မှာတော့ Android One (Pure Android) ကို သုံးထားတယ်ဆိုတာကလွဲရင် လောက်လောက်လားလားပြစရာအချက် Nokia မှာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ နောက်ပြဿနာတစ်ခုက Nokia ရဲ့ Flagship ဖုန်းတွေကနေ စတယ်ဆိုရမှပါ။ Nokia ရဲ့ Flagship Series တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Smartphone တွေရဲ့ Mainstream လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခြေတစ်လှမ်းအမြဲနောက်ကျနေခဲ့တယ်။ ဥပမာ FullView Display တွေ စခေတ်စားချိန် Nokia 8 မှာ ဘောင်တွေထူနေသေးတာ၊ Snapdragon 845 တွေပေါ်ချိန်မှာ Snapdragon 835 နဲ့ Nokia 8 Sirocco ကို မိတ်ဆက်တာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
နောက်ပြီး Nokia ရဲ့ဈေးကွက်ရပ်တည်မှုဟာ ဈေးသက်သာနဲ့ဘက်လည်းမရောက်၊ ဈေးအရမ်းကြီးတဲ့ဘက်ကိုလည်း မယိမ်းပဲ ကြားအခြေအနေပါ။ User တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖုန်းဝယ်ဖို့ရွေးကြတဲ့အခါမှာ ဈေးတန်ပြီး Specificaton သင့်တာရွေးမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ဈေးကြီးပြီး Quality ကောင်းတာကိုရွေးမလားဆိုတဲ့ အဓိကစဉ်းစားမယ့် အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ခက်တာက Nokia ရဲ့ ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက်ရပ်တည်မှုဟာ ရွေးချယ်သူရဲ့ဆန္ဒကို အပြည့်အဝ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာပါ။ ဒါ့အပြင် သူ့ထက်ငါ ပိုကောင်းအောင် အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားလာကြတဲ့ P2P ဈေးကွက်အရှိန်အဟုန်မြင့်လာချိန်မှာ Pure Android တစ်ခုထဲနဲ့ Customer တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုတာ အတော်မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဆက်ပြောရင် ဆိုလိုရင်းလမ်းလွဲကုန်မှာဆိုတော့ ပူပူနွေးနွေးမိတ်ဆက်ထားတဲ့ Nokia9PureView ဘက် ပြန်လှည့်ကြတာပေါ့။ Design ပိုင်းကိုအားပြုခဲ့တဲ့ Nokia 8 Sirocco က ထင်သလောက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့တော့ Nokia အနေနဲ့ သူတို့လားရာကို Camera ဘက်ဦးလှည့်လိုက်ပုံရတယ်။ (တစ်ချိန်က 41 MP Camera နဲ့ လူသိများခဲ့တဲ့ PureView Series ကို ပြန်အသက်သွင်းချင်ပုံရတယ်) ဟိုအချိန်ထွက်နိုး၊ ဒီအချိန်ထွက်နိုးနဲ့ မနှစ်ကတစ်နှစ်လုံးမှာ Nokia9ရဲ့သတင်းတွေ ဆက်တိုက်ထွက်ခဲ့တယ်။ Fan တွေအနေနဲ့ကလည်း Nokia9ရဲ့ Camera ၅ လုံးဟာ ဘယ်လိုမတူညီတဲ့ Function တွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာ ရင်ခုန်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် 12 MP, Aperture တူ, Focal Length တူတဲ့ Camera ၅ လုံးကို RGB Camera ၂ လုံး၊ Monochrome Camera ၃ လုံး အနေနဲ့ပွဲထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ဘယ်သူကထင်ထားခဲ့ကြမှာလဲ?
ချီးကျူးစရာအနေနဲ့ Snapdragon 845 ကိုသုံးပြီး Camera ၅ လုံးစလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် Lens 16 ခုပါတဲ့ Camera ဖန်တီးရှင် Light နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Lux Capacitor Chip ဖန်တီးထည့်သွင်းတာ၊ RAW DNG Format ကို Megapixel Data များများနဲ့သိမ်းဆည်းပြီး ဖုန်းထဲမှာတစ်ခါတည်း Edit လုပ်နိုင်အောင် Adobe နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Lightroom Apk ကိုထည့်သွင်းထားပေးတာ စတဲ့အချက်တွေက Nokia ရဲ့ ဒီဖုန်း Camera ပိုင်းကို ဘယ်လောက်ထိအားစိုက်ထားသလဲဆိုတာ ပေါ်လွင်သိသာစေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အားစိုက်မှုဟာ တကယ့်အသုံးတည့်စေတဲ့အားစိုက်မှုမျိုးလား?
ပထမဆုံးသံသယဝင်မိတာက သူ့ရဲ့ Camera ၅ လုံးအလုပ်လုပ်ပုံ။ Nokia ရဲ့အဆိုအရ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်တိုင်းမှာ Camera ၅ လုံးစလုံးက မတူညီတဲ့ Exposure, Focus အနေအထားတွေနဲ့ ပြိုင်တူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ Monochrome Camera တွေရဲ့အကူအညီကြောင့် Dynamic Range နဲ့ Depth Information တွေမှာ သာမန် Camera တွေထက် အဆအများကြီးပိုကောင်းနိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဥပမာပေးရရင် Nokia က လူငါးယောက်ကို မတူညီတဲ့တူရိယာကိုယ်စီနဲ့ သံပြိုင်တီးမှုတ်ခိုင်းတာနဲ့တူပြီး Google Pixel လို Software အသားပေး Camera မျိုးကျတော့ လူတစ်ယောက်ထဲနဲ့ တူရိယာတစ်ခုစီကို တစ်လှည့်စီ Studio မှာသွင်းပြီး အသံထပ်တာနဲ့တူပါတယ်။
ခက်တာက Smartphone Camera ဆိုတာ သံစုံတီးဝိုင်းမဟုတ်ပါဘူး။ Hardware ပဲအားကိုးကိုး၊ Software ပဲအားကိုးကိုး လိုချင်တဲ့ Result ရဖို့က ပိုပြီးအဓိကကျတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ Google လို Camera တစ်လုံးထဲမှာ HDR+ Mode ကို ဖွင့်ပြီး ရိုက်တဲ့ပုံနဲ့ Nokia ရဲ့ Camera ၅လုံးပြိုင်တူရိုက်ပြီး ရလာတဲ့ပုံက တစ်ကယ်ရော ကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုရှိနိုင်မလားဆိုတာက သံသယဝင်စရာပါ။
Camera ၅ လုံးရဲ့ နောက်ထပ်အသုံးဝင်မယ့်အချက်က Portrait Mode ပါ။ Camera ၅ လုံးကနေ မတူညီတဲ့ Depth Information တွေရယူနိုင်တဲ့အပြင်6လုံးမြောက်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ TOF Camera ကလဲ Depth Sensing ပိုင်းမှာ ကူညီပေးမှာဖြစ်လို့ Object တွေရဲ့ အနီးအဝေးပေါ်မူတည်ပြီး ပို Realistic ဆန်တဲ့ Boketh Effect ကို ဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Pixel လို Camera တစ်လုံးထဲနဲ့ ယူတဲ့ Depth Information ကို AI အကူအညီယူပြီးတွက်ချက်ပေးတဲ့ Portrait Mode, Background Blur Level ကို စိတ်ကြိုက်ပြန်ချိန်နိုင်မယ့် Built-in Function စတာတွေကနေ ရလာမယ့် Portrait Photo တွေနဲ့ယှဉ်ရင် သာမန် User တစ်ယောက်အတွက် အရမ်းသိသာတဲ့ကွာခြားမှုကို တကယ်ရောပေးစွမ်းနိုင်ပါ့မလား? ကျွန်တော်တော့ သံသယဝင်မိပါတယ်။ နောက်ဆုံး Ultra-wide Camera, 10x Lossless Zoom, Night Mode Photography စတာတွေ ခေတ်ထနေတဲ့ 2019 ရဲ့ Trend မှာ Nokia ရွေးထားတဲ့လမ်းစဉ်ဟာ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်လို ဖြစ်နေတယ်။
ဒါဆို Nokia9PureView ဟာ Normal User တွေအတွက်မဟုတ်ပဲ Camera Geek တွေအတွက်များ ရည်ရွယ်နေလေသလား? ကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့ပြောရရင် DSLR ကိုပဲအဓိက အားကိုးတဲ့ Camera Geek တွေအနေနဲ့ကရော Nokia9လိုဖုန်းကို Camera အတွက်နဲ့ပဲ တခြား Flagship တွေကိုကျော်ပြီး ဦးစားပေးရွေးပါ့မလားလို့ ပြန်မေးစရာရှိပါတယ်။ Nokia ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့ဖုန်းကို Limited Stock နဲ့ပဲ ရောင်းချသွားမယ်လို့ ကြေငြာထားပုံထောက်ရင် သူတို့ဖုန်းရဲ့ ခန့်မှန်းရောင်းအားအပေါ် ယုံကြည်မှုအားနည်းနေလေသလားဆိုတာ သံသယဝင်စရာဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ (၂နှစ်နီးပါးလောက် ကြိုးစားလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအပေါ် သူတို့မျှော်လင့်တာက ဒီလောက်ပဲလားလို့ မေးရမလိုဖြစ်နေပြန်ရော)
မဆိုးဘူးလို့ဆိုနိုင်တာကတော့ သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့။ $700 ဆိုတဲ့ဈေးက US လိုနေရာမျိုးမှာ Pixel3ရဲ့ Basic Version ထက်တော့ ဈေးပိုသက်သာနေတာ အမှန်ပါ။ ဒီအချက်က Mobile Photography ကို စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် Nokia9ကို ရွေးချယ်စေနိုင်တဲ့ Attraction တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ (Pure Android လဲသုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့) သို့ပေမယ့် Normal User တစ်ယောက်အနေနဲ့ SD 845, IP 67, Date အောက်နေပြီ ဆိုနိုင်တဲ့ Design, Single Speaker, QC3Support လုပ်မယ့် 3320 mAh Battery စတာတွေက 2019 Flagship တွေနဲ့ယှဉ်ရင် Nokia9ကို တစ်ပန်းအရေးနိမ့်စေမယ့် အချက်တွေဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဒီတော့ Customer Segment နဲနဲကို Target ထားတဲ့၊ Premium Level ကိုရောက်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့၊ အရေအတွက်နဲနဲပဲ ထုတ်ရောင်းဖို့ရည်ရွယ်နေတဲ့ Nokia ရဲ့ရွေးချယ်မှုဟာ အတော့်ကိုလွဲမားမှုကြီးလို့ မြင်လာတယ်။ Western မှာ Pure Android ကိုလူကြိုက်များတာမှန်ပေမယ့် UI သုံးတဲ့ Samsung, Huawei, Honor စတဲ့ဖုန်းတွေရဲ့ရောင်းအားက ထိပ်ဆုံးရောက်နေတာဟာ Android One တစ်ခုထဲအပေါ် ရေရှည်အားကိုးနေလို့မဖြစ်တာကို Nokia အနေနဲ့ သိသင့်ပြီထင်မိတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ပထမတစ်ကြိမ် ပျောက်ကွယ်လုနီးနီးဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ ပြန်လည်နိုးထလာတဲ့ တစ်ချိန်က Tech Giant ကြီးကို Smartphone နယ်ပယ်မှာ ထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေမရခင် ထပ်ပြီးမတိမ်မြုပ်သွားဖို့ကို ဆုတောင်းနေမိပါတော့တယ်။
Smartwatch Display ေတြကို Speaker အျဖစ္သံုးႏိုင္ဖို႔ ၾကိဳးစားေနတဲ့ LG